သနပ်ခါးမေ: May 2012
By **~ မြတ်ကြည်~** 8:20 AM မြတ်ကြည်၏ စုံစီနဖာ
ဟိုတစ်ပတ်က တိမ်ပြာပြာ၊ နေသာသာရှိတုန်း ကျောင်းက ကလေးတွေနဲ့ Picnic ထွက်ကြပါတယ်။ Picnic ဆိုလို့ ဝေးဝေးလံလံ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မ နေတဲ့ အဆောင်နဲ့ ဘေးကပ်လျက်က ကွင်းမှာ။ :D
ကလေးတွေရဲ့ သူငယ်ချင်းက Ethiopia က။ သူ့ဆီက ချက်နည်း သင်ပြီး ပြန်လက်စွမ်းပြကြတာ။ ဒီက စားသုံးသူ။ :)))
စားကောင်းတာနဲ့ ကလေးတွေကို မေးကြည့်ပြီး ပြန်ပြီးဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီး spaghetti ဆော့စ် ကို နွှေးပြီး တစ် ပန်းကန် သပ်သပ်ထည့်။ ဝက်သားကို ကြက်သွန်နီနဲ့ ချက်၊ ပြီးရင် မုန်လာဥ၊ အာလူး၊ ငရုတ်ပွ၊ ပန်းဂေါ်ဘီစိမ်း တို့နဲ့ပြန်ရော၊ အဲဒါက တစ်ခွက်။ ခေါက်ဆွဲက spaghetti ခေါက်ဆွဲကို မကပ်အောင်ဆီထည့်ပြီး ပြုတ်။ စားခါနီးမှ အကုန်လုံးကို ပုံပေးပြီး စားကြပါတယ်။ အအီကြိုက်ရင်တော့ chedder cheese ကို ခြစ်ထည့်ပါတယ်။
Nature Republic : Style Lean Nail Stickers
အခု Nature Republic က လက်သည်း stickers လေးတွေ လှတယ်။ ဒီဇိုင်း မျိုးစုံရှိတယ်။ တစ်ခု အစမ်းဝယ်ပြီး လုပ်ကြည့်ထားတာ။ တစ်ခု နှစ်ထောင်ဆိုပေမယ့် လှတော့ ဝယ်ရတာ တန်ပါတယ်။
Style Lean Nail Sticker
ကပ်တဲ့ အခါ နည်းနည်း ရှည်ထွက်တာရှိတယ်။ ကပ်ပြီးမှ လက်သည်းညှပ် ကပ်ကြေးနဲ့ ပြန်ညှိပါတယ်။ အဲဒါပိုအဆင်ပြေတယ်။ :)
ဖုန်း အသစ်လေး ရတာနဲ့ ဒီ application လေး install လုပ်ထားတာ။ ပုံလေးတွေ ရိုက်ပြီးရင် ဒါလေးနဲ့ ပဲ အရောင် edit လုပ်ဖြစ်နေတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကြား ပြန်ရှယ် လို့လည်း ရတယ်။ အသေးစိတ် လိုက်ပြင်စရာ မလိုပဲ သူ့ထဲက ကိုက်မယ့် style တစ်ခုကို ရွေးရုံပါ။ Vintage ကို နှစ်သက်တဲ့ သူတွေ သဘောကျမှာ ကျိန်းသေပါပဲ။ www.instagram.com မှာ ဖုန်း အတွက် down လို့ရပါတယ်။
ပြောချင်တာတွေများတာနဲ့ အသုပ်စုံ ဆန်သွားမလားမသိ။ ရေးတဲ့ထဲက တစ်ခုခုရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ မြတ်ကြည် ရှေ့လျှောက်အတွက် tutorial လေးတွေ လုပ်ဖို့ ရှိပါတယ်။ အရပ်ရှည်တဲ့ နည်းလည်း ရှာပြီးရင် ရေးပေးပါမယ်နော်။
စာဖတ်သူများ သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့လေးတစ်ရက်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။
By **~ မြတ်ကြည်~** 2:21 PM အသားအ​ရေ ထိန်းသိမ်းနည်း
မျက်တောင်ဆိုတာ မျက်လုံးရဲ့ အနီးဆုံး လည်းဟုတ်၊ ပျိုမေတွေရဲ့ မျက်ဝန်းအလှကို ပိုမိုစေတဲ့ အချက်ထဲကလည်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရှည်လျား ကော့ညွတ်တဲ့ မျက်တောင်တွေကို မပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ မိန်းကလေး ဘယ်ရှိမလဲနော်။ မျက်တောင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သိထားသမျှ လက်လှမ်းမီသလောက် လေးတွေ စုစည်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
သာမန်ဆို မျက်တောင် တစ်ပင် နှစ်ပင် ကျွတ်တတ်ပေမယ့် မွေးညှင်းအိတ်ကနေ ရက်အနည်းငယ်ကြာတဲ့ အခါ နဂိုအတိုင်းပြန်ပေါက်ပါတယ်။ အသက်ကြီးတဲ့ အခါမှာတော့ မျက်တောင်တွေဟာ ငယ်တုန်းကထက် ပိုပါးလာတတ်ပါတယ်။ တချို့တလေ aloplecia areata ဆိုတဲ့ ရောဂါ နဲ့ thyroid ဟော်မုန်းချို့တဲ့ တဲ့ ရောဂါတွေမှာတော့ မျက်တောင်ရော၊ ဆံပင်ရော ကျွတ်တတ်ပြီး၊ ကျွတ်ပြီးရင်လည်း သာမန် အခြေအနေ ပြန်မရတတ်ပါဘူး။
မျက်တောင်ကို mascara နဲ့ဖြစ်ဖြစ် eyelash curler နဲ့ ဖြစ်ဖြစ်၊ အမြဲကော့နေတတ်တဲ့ သူများဟာ သာမန်လူတွေထက် ပိုပြီး မျက်တောင်မွေး အကျွတ်လွယ်ပါတယ်။ mascara ဟာ ဓာတုပစ္စည်းကြောင့် မျက်တောင်ပျက်စီးရုံသာမက မျက်တောင်ရဲ့ အလေးချိန်ကို ပိုစီးစေတာမို့ မျက်ခွံ မွေးညှင်း အိတ် က နေ အလွယ်တကူ ကျွတ်ထွက်စေပါတယ်။
ထို့အတူ မျက်တောင်အတုကို သုံးရင်လည်း အသုံးပြုတဲ့ ကော်နဲ့ တပ်ထားတဲ့ မျက်တောင်တုအလေးချိန်က မျက်တောင်ကျွတ်တာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
မျက်လုံး ခဏခဏပွတ်တာလည်း မျက်တောင်ကို ပိုကျွတ်စေပါတယ်။
မျက်စိ ခဏခဏ စွံ (styes) ဖြစ်တတ်တဲ့ နေရာတွေမှာလည်း အမာရွတ်ထင်သွားရင် မျက်တောင်အသစ် ပြန်မပေါက်တတ်ပါဘူး။
အမှန်တော့ မျက်တောင်ဆိုတာဟာ ဆံပင်နဲ့ အခြားခန္ဒာကိုယ်က အမွေးအမြင်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံသဘောသဘာဝချင်းအတူတူမို့ ဆံပင်ကို သန်စွမ်းစေတဲ့ အာဟာရတွေ မှီဝဲရင် မျက်တောင် အတွက်လည်း အကျိုးရှိစေပါတယ်။ အစိုဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးတဲ့ Vitamin E၊ ဆံပင်ကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေတဲ့ Vitamin B တွေပါ။
Mascara အသုံးပြုပြီးရင် makeup remover ကို သုံးပြီး စင်အောင်ပြန်ဖျက်ပေးပါ။
ညမအိပ်ခင် မျက်တောင်အရင်း တလျှောက်ကို ဂွမ်းနဲ့တို့သံလွင်ဆီဆွတ်ပေးပြီး မနက်ကျရင် မျက်နှာသစ်ပါ။
မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ကို လက်နဲ့ နှိတ်ပေးရင် သွေးလည်ပတ်မှုပိုကောင်းစေပြီး မျက်တောင်ကို ပိုမို သန်စွမ်းစေပါတယ်။
Lash boosting serum ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ L'Oreal က ထုတ်တာ အခုတလော နာမည်ကြီးနေပါတယ်။ ရလာဒ်က ကျေနပ်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ပုံမှာပြထားတာက အသုံးပြုပြီး၂၄ရက် အတွင်းကွာခြားမှုပါ။
ဓာတ်ပုံကို Sippinonkrystyle blog မှယူပါတယ်။
မျက်တောင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သိထားတာတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ ညီမလေး သစ်ခက်စိမ်း အတွက်လည်း အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။ :)
ယခု ဒီဆောင်းပါးလေးကို Laurean Wise ရေးသားတဲ့ How to make your eyelashes longer without mascara နဲ့ Do eyelashes grow? မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
တခါတလေ blog posts တင်တာများလာတော့ မထပ်အောင် ဘာတင်ရမှန်းမသိတာရယ်၊ တင်လိုက်လို့ စိတ်မဝင်စားတာ ဖြစ်မှာရယ် စိုးရိမ်ပါတယ်။ သိချင်၊ ရေးစေချင်တဲ့ ပို့စ်ရှိရင် ပြောပေးကြပါလို့။
By **~ မြတ်ကြည်~** 1:11 AM တိုတိုထွာတွာမှတ်စရာ
ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ မိန်းကလေးတွေ ကွာတာ၊ ယောက်ျားလေးတွေက ဘယ်လောက်ပဲ အမွေးထူထူ တောပဲဖြစ်ဖြစ် ဂရုစိုက်စရာမလိုပေမယ့် မိန်းကလေးတွေ အမွေးထူရင်တော့ စိတ်ညစ်စရာ ဖြစ်သွားရော။ အထူးသဖြင့် အခုလို အတိုအပြတ် ဝတ်တဲ့ ခေတ်မှာပေါ့။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို ခြေသလုံးမွေးရှည်လို့တဲ့။ စကတ်တို လုံးဝ မဝတ်ဘူး။
မလိုအပ်တဲ့ အမွေးတွေ ဖယ်ရှားဖို့အတွက် သိထားတာလေးတွေ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ရိတ်မယ်။ ကျွန်မရဲ့ အခန်းဖော်ဆို ရေချိုးခန်းမှာ ဘရိတ်ဓား (ချုတ်) ထားထားပါတယ်။ ရိတ်တာရဲ့ မကောင်းတဲ့အချက်က ပိုပြီး သန်တယ်။ ၁ ပတ် တစ်ခါ လောက်ကို ရိတ်ပေးနေရပြီး၊ ပြန်ထွက်လာရင် အရမ်းသိသာပါတယ်။
ဖယောင်းသုံးပြီး ခွါတာပါ။ အနာခံနိုင်တဲ့ သူများ အတွက်ပေါ့။ ကောင်းတဲ့ အချက်က တော်ရုံနဲ့ ပြန်မထွက်ပါဘူး။ တစ်ခါလုပ်ထားလိုက်ရင် ၁လ ၂လလောက် အေးအေးဆေးဆေး နေလို့ရပါတယ်။
မြတ်ကြည်သုံးပါတယ်။ လိမ်းထားပြီး ၅ မိနစ်လောက်ထား ပြီးရင် spatula လေး နဲ့ ခြစ်၊ ရေဆေးချ။ မကောင်းတဲ့ အချက်က chemical တွေ သုံးထားတာမို့ ဓာတ်မတည့်တာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ for sensitive skin လို့ရေးထားတာ ရှာသုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ အရင်ကသုံးတာက Veet တံဆိပ်ပါ။ ဒီရောက်တော့ ရှာမတွေ့တာနဲ့ thefaceshop ပြောင်းသုံးပါတယ်။
ခန္ဒာကိုယ်ရဲ့ ဘယ်နေရာမဆို လုပ်လို့ရပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ အချက်က ၁ ခေါက်တည်းနဲ့မပြီးပါဘူး။ ပြန်ထွက်တာကို လုံးဝပြီးပြတ် ဖြစ်ချင်ရင် အနည်းဆုံး ၄ ခေါက်လောက်သွားရပါမယ်။ လုပ်ပြီးရင် နီတာမြန်းတာရှိပေမယ့် ၂၄နာရီ ကြာရင် ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှ ရနေပြီလို့ ကြားပါတယ်။
Bleaching / အရောင်ဆိုး
လက်မွေးတို့ ခြေသလုံးမွေးတို့ဆိုတာက အမြဲရှည်ထွက်နေတဲ့ အရာမဟုတ်တော့ တချို့တလေ အရောင် ချွတ်၊ ဒါမှမဟုတ် အနုဆိုး လိုက်ပါတယ်။ မသိသာတော့ဘူးပေါ့။
အသားကပ်ခြေအိတ် ဝတ်လိုက်ရင် အမွေးရှိတယ်၊ အမာရွတ်ရှိတယ် ထားဦး အသားရောင်နဲ့ ရောသွားတော့ ... မသိသာတော့ပါဘူး။ ကရိကထလည်း မများပါဘူး။ ဒီကကောင်မလေးတွေ အတိုဝတ်ရင် ဒီအတိုင်းထက် အသားရောင် stocking/ pantyhose နဲ့ တွဲဝတ်ကြပါတယ်။
ဒါလေးတွေက မြတ်ကြည် သိထားသလောက်ပါ။ စာဖတ်သူတွေ သိထားတဲ့ အခြားနည်းတွေရှိရင် ပြောပြစေချင်ပါတယ်။ ပိုပြည့်စုံ သွားတာပေါ့။ :)
မြတ်ကြည် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရှုပ်ရှတ်ခတ် နေတာနဲ့ ဘလော့မရေးဖြစ်တာ တော်တော်လေးကြာသွားပါတယ်။ ပို့စ် အသစ်မရှိပေမယ့်လည်း အမြဲလာအားပေးကြလို့ ကျေးဇူးပါနော်။ ပုံမှန်ပြန်တင်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။
သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့လေး တစ်ရက် ဖြစ်ပါစေရှင်။
By **~ မြတ်ကြည်~** 4:25 AM လက်​သည်း ( nail art )
ဒီတစ်ခေါက်တော့ စိတ်ကူးပေါက်လို့ ဆိုးကြည့်ထားတဲ့ လက်သည်းပုံစံလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ပုံစံက တရုတ် ယပ်တောင်ထဲက ပန်းနဲ့ (ကိုယ့်အမြင်မှာ) ဆင်လို့။ လွယ်လွယ်လေးပါပဲ။ ထုံးစံအတိုင်း သွားကြားထိုးတံ တစ်ချောင်းရှိရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ :)
....... Method .......
မြတ်ကြည်ကတော့ အောက်ခံကို ရွှေရောင်သုံးထားပါတယ်။
ပြီးရင် သွားကြားထိုးတံကို သုံးပြီး ပန်းပွင့်အတွက် အဖြူရောင် အစက် ၅ စက် ကို အပေါ်နားမှာ တစ်ခု၊ အောက်နားမှာတစ်ခု လိုက် ထည့်ပါတယ်။
ရွှေရောင်နဲ့ လိုက်တဲ့ အနီရောင်ကို ဝတ်ဆံနေရာမှာ သုံးလိုက်ရင် ရသွားပါပြီ။ :)
ကိုယ်နှစ်သက်သဘောကျတဲ့ အရောင်တွေနဲ့လည်း အစားထိုးချယ်လို့ရပါတယ်။
ဒီနည်းလေးကို စာဖတ်သူများ အခက်အခဲမရှိအောင် ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ :)
အရင်ဆုံး စာရွက် တစ်ရွက်ပေါ်ကို ကိုယ်အစက်ချချင်တဲ့ အရောင်ကို တင်ပါ။ ပြီးရင် သွားကြားထိုးတံကို ၅ စက္ကန့်လောက် နှစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် လေသလပ်ခံပါ၊ ၅ စက္ကန့် ပြန်နှစ်ပါ၊ လေသလပ်ခံပါ။ ပြန်နှစ်ပြီးရင် အစက်ချလို့ရပါပြီနော်။
လွယ်လွယ်ကူကူ dotting tool ဆိုတာလည်း သုံးလို့ရပါတယ်။
လုပ်ကြည့်ပြီးရင် အဆင်ပြေမပြေ ပြန်ပြောပေးပါနော်။
အလှအပ အတွက် ပို့စ်ကောင်းကောင်းလေးတွေ တင်ဖို့ရှာနေပါတယ်လို့..
အလှတွေ ပိုနိုင်ကြပါစေရှင် :)